राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सकारात्मक सन्देश – Sourya Online
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सकारात्मक सन्देश
रमेश लम्साल २०७६ चैत ९ गते ७:०० मा प्रकाशित
सरकारको सार्थक प्रयासका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना क्रमशः सफलताको विन्दुमा पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा आएका सकारात्मक खबरले पनि ती आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
संसार नै कोरोना भाइरसका कारण आतकिंत भइरहेको बेला नेपालमा भने एकाध आयोजनाबाहेक निर्माण क्षेत्रमा खासै प्रभाव परेको छैन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थलमा पानी जम्मा गरेर परीक्षण थालिएको छ । कुल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको भौतिक निर्माण ९९ दशमलव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
आयोजनाको बाँध, बालुवा थिग््रयाउने पोखरीको परीक्षण थालिएको र नियमित परीक्षण गरिने आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आगामी असारभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको प्रमुख जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कार्य जारी छ ।
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार सात दिनसम्म लगातार पानी जम्मा गर्दै परीक्षण गरिनेछ । उनले आयोजनाको भौतिक संरचनाको अवस्थालाई समेत परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने जानकारी दिए । यस्तै लामो समयदेखि काठमाडौंवासीको लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा समेत पानी पठाएर परीक्षण थालिएको छ । खानेपानीमन्त्री बिना मगरको उपस्थितिमा आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिएको हो ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ । हालको अवस्थामा करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको यो विमानस्थल सञ्चालनको अवस्थामा रहे पनि (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण असर परेको छ । माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुवै आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका ठूला आयोजनालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको भए पनि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, पछिल्लो पटक सरकारले सबै प्रकारको साधन र स्रोतको उपलब्ध गराएको, आयोजनाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएको तथा कार्यसम्पादन करारमार्फत पनि काम गरिएका कारण केही आयोजनाले आशालाग्दो संकेत दिएका छन् ।
माथिल्लो तामाकोसीको बाँधमा पानी जम्मा पारेर परीक्षण थालिनुले पनि एउटा खुसीको सञ्चार गरेको छ । प्रवक्ता डा. न्यौपानेले भने, ‘यो आफैँमा महत्वपूर्ण दिन हो ।’ यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएपछि आयोजनाको कामले गति लिएको पाइएको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमार्गको परीक्षण भएको छ । मन्त्री मगर, मेलम्ची विकास समितिका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मेलम्चीको बाँधस्थलबाट सुरुङमार्गको परीक्षण गरिएको हो । सिनोहाइड्रोले जिम्मा लिएका काममध्ये बाँधको काम ४० प्रतिशत, टनेलको काम ७५ प्रतिशत, साना ठेक्काको सप्लाइको काम ७५ प्रतिशत, स्काडा प्रविधि जडान सय प्रतिशत, गेट जडान ५० प्रतिशत र भेन्टिलेसनको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ ।
अन्य आयोजनामा कोरोनाको प्रभाव परेको भए पनि सो आयोजनामा हालसम्म त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । देशकै ठूलो आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीको कुल २२ मिटर उचाइ तथा ६० मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गरिएको छ । बाँधमा आठ ढोका रहेका छन् । त्यसमा चार वटाबाट निकास हुने पानी बालुवा थिग्रयाउने बेसिन हुँदै मुख्य सुरुङमार्फत विद्युत् गृहमा पुगेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी मिलाइएको छ ।
हाल मुख्य सुरुङमा अन्तिम चरणको ढलान कार्य भइरहेको छ । सबैभन्दा कठिन मानिएको ठोडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म ठाडो सुरुङमा कुल ३ सय ९५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान कार्य पूरा भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वैशाखभित्र ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कार्य सम्पन्न गर्न गत फागुन १४ गते आयोजनास्थल पुगेर निर्देशन दिएका थिए ।
आगामी असारभित्र सबै बाँकी काम पूरा गरेर पहिलो युनिट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो युनिट सञ्चालनमा आएपछि क्रमशः अन्य युनिट पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ । माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा १० मिटरका दुई वटा पाइप जडान गर्न क्रमशः सात र पाँच दिनमा आइसकेकाले कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा वैशाखभित्रमा पाइप जडान भइसक्ने आयोजनाले बताएको छ । त्यसपछि माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा रहेको तेस्रो भागमा पाइप जडान सुरु हुने र त्यसका लागि करिब साढे एक महिना लाग्ने बताइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो तालिकाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी असारभित्र कम्तीमा पनि एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका बनाई त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुधार गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । पहिलो युनिटबाट कूल ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलगायतले गम्भीर चासो लिएका छन् ।
विद्युत् गृहका सम्पूर्ण उपकरण जडान भई तयारी अवस्थामा छन् । प्रसारण लाइनको १ सय २७ टावर निर्माण र ४७ किलोमिटर तार टाङ्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । रामेछापको खिम्तीमा निर्माण भइरहेको न्यू खिम्ती २ सय २० केभी सवस्टेसनको सिभिलतर्फका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपकरण जडान गरी चार महिनाभित्रमा सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
कोरोनाका कारण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने केही समस्या देखिएको छ । आयोजना अझै कम्तीमा छ महिना लम्बिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । सन् २०२१ को सुरुआतबाट मात्रै सञ्चालनमा आउने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । भौतिक संरचना निर्माण भइसके पनि विमानस्थलको प्राविधिक काम धेरै बाँकी छ, कतिपय उपकरण आउन सकेका छैनन् त्यसैले आयोजना झण्डै एक वर्ष ढिलो हुने स्थिति देखिएको हो ।
प्राविधिक कारण ढिलाइ हुने खतरामा रहेको उक्त आयोजनालाई कोरोनाको सन्त्रासले थप बाधा उत्पन्न गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा १ सय १४ चिनियाँ कामदार छन् । यीमध्ये केही चीनतिरै छन् भने नेपाल आएका छ जना कामदार पनि अहिले क्वारेनटाइनमा छन् । आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले अबको दुई महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालनको भौतिक संरचना निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।